အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ဂျုံ ခေါက်ဆွဲ အရည်ဖျော် နဲ့ ဆီချက်
ဒီရက်ပိုင်း တီချမ်းတယောက် ခေါက်ဆွဲတွေချည်းစားဖြစ်နေပါတယ် ဘက်လိုက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ တကယ့် Literally ခေါက်ဆွဲတွေ တီးဖြစ်နေတာကိုပြောတာပါ။ ခေါက်ဆွဲစားရင်စား မစားရင် ဖက်ထုပ်စား မစားရင် ညှပ်ခေါက်ဆွဲစား မစားရင် ခေါက်ဆွဲထုပ်စား အဲ့လုို ခေါက်လိုက်ဆွဲလိုက်ပဲ လုပ်နေတာပါ။ အသုပ်လုပ်စားတာတောင် ခေါက်ဆွဲမှ မလွတ်တာနော်.......ထားတော့ ဒီနေ့တော့ တရုတ်နည်းအတိုင်း လုပ်စားတဲ့ ဂျုံခေါက်ဆွဲလေးတွေကို အရည်ဖျော်နဲ့ကော ဆီချက်အနေနဲ့ကော တင်ပေးပါအုံးမယ်။ ပထမဆုံးတော့ ဟင်းရည်အဖြစ် ဝက်ရိုး အရိုးကြမ်းလေးတွေတွေ့လို့ဝယ်လာတာကို ပြုတ်လိုက်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း တီချမ်းတို့ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် မဟာဟင်းရည်ကြည်တည်နည်းအတိုင်းတည်ပါနော်။ နောက်တခါ တနေ့က ဝယ်ထားတဲ့ မုန်လာဥဖြူ နှစ်လုံးရှိတာနဲ့ ပိုချိုအောင် အကွင်းလေးတွေ လှီးထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဟင်းရည်တအိုးရပြီပေါ့။ ဟင်းရည်က အရည်ဖျော်ဆိုရင် ဟင်းရည်အနေနဲ့ ထည့်ပြီးတော့ ဆီချက်ဆိုရင်လဲ ဟင်းရည်သောက်လို့ရတာပေါ့။ ပြီးတော့ နောက်နေ့လဲ ထပ်ထပ်ပြီး လုပ်စားရတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဟင်းရည်တအိုးချက်ထားရင် ၂ ရက် ၃ ရက်လောက်စားလို့ ရပါတယ်။ မောင်ကတော့ မနက်စာအနေနဲ့ကျွေးရင် မစားပါဘူး။ သူက မနက်စာမစားတတ်တဲ့သူပါ။ မွေးရတာ လွယ်တာပေါ့နော်။ ဖက်ထုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ခေါက်ဆွဲပဲဖြစ်ဖြစ် ညစာအနေနဲ့ ကျွေးရင်တော့ စားရှာပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ခေါက်ဆွဲ တုို့ဆန်ပြုတ်တို့လိုဟာတွေဆို တနေ့လုံးလဲစားနိုင်တယ် တလလုံးလဲ စားနိုင်ပါတယ်။ သိပ်ကြိုက်တယ်။ အဲ့တာကြောင့် တခါတခါ ချက်စားရင် အကြာကြီးလဲ စားရ လုပ်ရတာလဲ လွယ်တော့ တီက ခဏခဏ လုပ်စားဖြစ်ပါတယ်။
Anonymous February 1, 2012 at 8:02 PM
Evy February 1, 2012 at 10:36 PM
ညကြီးမိုးချုပ်ဗိုက်ဆာသွားပြီ။ တီချမ်းလုပ်လိုက်မှဖြင့် အဲလို။ လာအော်ထားတာတွေ့တယ်။ ရေးမလို့ အရှိန်ယူနေတုံး။ စကားမစပ် တီ့ခေါက်ဆွဲကို ပိုကြိုက်တယ်။ အမဲသားနဲ့လေ။
တီချမ်း February 1, 2012 at 11:26 PM
အီဗီရေ.....အဲ့တာက သူငယ်ချင်းကိုလုပ်ကျွေးတာ သူကတော့ အရမ်းကောင်းပြောတာပဲ
mite tel kwar.
t chan ka very smaret naw.
Anonymous February 2, 2012 at 6:59 AM
Vista February 2, 2012 at 12:21 PM